Maraykanka oo markale hoos u dhigey kartida ciidanka Somaliya xilli cunaqatayn ku hayo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maraykanka oo markale hoos u dhigey kartida ciidanka Somaliya xilli cunaqatayn ku hayo
Warbixin ay wasaarada arimaha dibeda Maraykanka ka soo saartey tayada ciidanka qaranka ee dalka ayay ku yastey sheegtayna in ciidanku dalka ka xoreyn karin argagixisada xilli Maraykanku kow ka yahay dalalka cunaqataynta ku haya Somaliya.
Sanado badan ayaa Somaliya loogu soo marmarsiiyoodaa in aan laga qaadayn cunaqataynta hubka, ayagoo raba in dalku weligii ku tiirsanaaado ilaaliada ciidamada Afrikaanka iyo kooxda Xalane joogta oo dalka ku qaba malaayiin doolar oo Kiiniya lagu jaqo.
Wuxuu Maraykanku amaanay keliya sida loogu ogolyahay iyo in aan loo ogoleynba diyaaradaha uu markasta ku laayo dadka shacabka ah ee gobolada Jubooyinka iyo Shabeelooyinka. Diyaaradaha aan is wedin ayaa qaarkood lagu tijaabiyaa sidey hubka u ridayaan iyo weliba masaafaha ay socon karaan.
”Waa munaafaqadii Maraykanka oo halkan taagan ayuu yiri Cali Calasow. Wuxuu rabaa in dalka cadkiisa ka goosto markay noqoto kheyraadka hadduu waayana wuxuu haystaa horjoogeyaal u diyaara inay la shaqeeyaan, waana ujeedada ugu weyn ee dalka aan loogu ogoleyn in ciidankiisu dhismo.